ကလေးကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဘယ်လိုစောင့်ကြည့်မလဲ - Hello Sayarwon
သင့်ကလေးကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဘယ်လိုတိုင်းတာရမလဲ ဆိုတာကို သင်သိပါသလား။ များသောအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အရပ်အမောင်းနှင့် ကိုယ်အလေးချိန်ဖြင့် တိုင်းတာကြသည်။ သို့သော် မွေးကင်းစမှ အသက် ငါးနှစ်အရွယ်ထိ သင့်ကလေးသည် ကစားခြင်း၊ သင်ယူခြင်း၊ စကားပြောခြင်း၊ လှုပ်ရှားခြင်းဆိုင်ရာ ဖွံဖြိုးမှုမှတ်တိုင်များရှိပေသည်။ အကယ်၍သင့်ကလေးသည် သူ့အရွယ်မှာရောက်သင့်သည့် ဖွံ့ဖြိုးမှုမှတ်တိုင်ကို မရောက်ဖူးဆိုရင် ဒါဟာ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာ(ဥပမာ- အော်တစ်ဇင်) ရှိကြောင်း ညွှန်ပြနေပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ကလေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှေးကွေးခြင်းကို စောစောစီးစီး သတိထားမိနိုင်ရင် ကလေးအတွက် များစွာအကူအညီဖြစ်စေပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည် သင့်ကလေး ကစားခြင်း၊သင်ကြားခြင်း၊ စကားပြောခြင်း၊ လှုပ်ရှားခြင်းမှာ တစ်စုံတစ်ရာ မူမမှန်မှုကို သတိထားမိခဲ့ရင် ကလေးဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။ စောစောစီးစီး သိကာ ကုထုံးတွေကို စတင်နိုင်ခြင်းက တကယ့်ကို ခြားနားမှုကြီးကို ဖြစ်စေနိုင်လို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သင့်ကလေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို စောင့်ကြည့်ဖို့ သင့်ကလေး လသားအရွယ်မှာ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု နှင့် ဘာသာစကား စွမ်းရည် လက္ခဏာတွေကို စောင့်ကြည့်ပါ။ ကလေးသည် တစ်လသားအရွယ်ကပင်စပြီး အအ၊ အိအိ အသံထွက်တတ်နေပါပြီ။
သုံးလလောက်ရောက်ပြီဆိုရင် သူတို့ကို ချီထားချိန် သူတို့ခေါင်းလေးကို မတ်တတ်နေပါပြီ။ လေးလအရွယ်တွင် သင့်ကိုပြန်တုံ့ပြန်ပြီး စကားပြောဖို့ကြိုးစားနေကာ သင့်ရယ်မောသံကိုလည်း တုံ့ပြန်တတ်နေပါပြီ။ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ စကားပြောခြင်းကဲံ့သို့ သိသာထင်ရှားသော တိုးတက်လာမှုများနှင့်အတူ အထက်ပါ ကလေးဘဝအစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးမှု မှတ်တိုင်များကိုလည်း မိဘများအနေဖြင့် စောင့်ကြည့်တာ နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ကလေးကို အခြားရွယ်တူကလေးများနှင့် နှိုင်းယှဉ်တာမျိုးကို ဂရုစိုက်ပါ။ ကလေးတိုင်းသည် မတူညီဘူးဆိုတာကို အမြဲသတိပြုပါ။ သို့သော် ကလေးတစ်ယောက်သည် ပုံမှန်ရောက်သင့်သော ဖွံ့ဖြိုးမှုမှတ်တိုင်ကို လုံးဝမရောက်ဘူးဆိုလျှင်တော့ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှေးကွေးခြင်းပြဿနာ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ စောမွေးသော ကလေးများသည် နေ့စေ့လစေ့မွေးသော ကလေးများကဲ့သို့ ကြွက်သားခွန်အား၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်း မတူညီနိုင်ပါ။ သို့သော် အချိန်တန်ရင် ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးသည် အထူးသဖြင့် လူမှုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲရှိနေလျှင် အော်တစ်ဇင်ဖြစ်နေနိုင်သည် (သို့သော် ရှားပါသည်။) အခြားသော နှေးကွေးမှုများသည် မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ မူမမှန်မှုများ ဥပမာ-ဒေါင်းရောဂါလက္ခဏာစု၊ ဉာဏ်ရည်ချို့ ယွင်းမှုပြဿနာများကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အောက်ပါနည်းလမ်းများသည် ကလေးအခြေအနေတိုးတက်လာစေရန် ကြိုးစားနိုင်သော နည်းလမ်းအချို့ဖြစ်သည်။
အကြမ်းဖျင်းကြွက်သားလှုပ်ရှားမှု ။ ကလေးနိုးနေစဉ်မှာ ထိုင်လျက်အနေအထားမျိုးကို ထားပေးခြင်းဖြင့် လည်ပင်းနှင့် နောက်ကျောကြွက်သားများဖွံ့ဖြိုးလာအောင် လေ့ကျင့်ပေးနိုင်သည်။ ကလေးကြီးများအတွက်မူ ပြေးလွှားခုန်ပေါက်ခြင်းကို ပြုလုပ်ဖို့ အချိန်ပေးပါ။
အနုစိတ်ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှု ။ မျက်နှာပြင်အကြမ်း၊အချော မတူညီသော အရုပ်မျိုးစုံကို ကလေးကိုပေးဆော့ပါ။ ကလေးသည် သူ့လက်နှင့် ကိုင်တွယ်လေ့လာရင်း မတူညီသောခံစားမှုကို ရှာဖွေလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဘာသာစကားစွမ်းရည် ။ မွေးကင်းစကလေးများအတွက် ဂီတသံစဉ်များကို ဖွင့်ထားပေးပါ။ ၎င်းသည် ကလေး၏ အကြားစွမ်းရည်ကို တိုးတက်စေသည်။ ကလေးကို စကားပြောခြင်း၊စာဖတ်ပြခြင်းတို့ကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးပါ။
လူမှုဆက်ဆံရေး ။ သင့်ကလေးကို ရယ်ပြ၊ ပြုံးပြပါ။ တီဗွီကြည့်ချိန်ကို လျှော့ပြီး သင့်ကလေးနဲ့ အတူဆော့ကစားပေးပါ။
Free Tools to Track Your Child’s Development. https://www.cdc.gov/features/trackmilestones/. Accessed on March 11, 2017.
Monitoring Your Child’s Development: Your Pediatrician Can Help. http://www.cfah.org/prepared-patient/prepared-patient-articles/monitoring-your-childs-development-your-pediatrician-can-help. Accessed on March 11, 2017.
Timeline of child milestones, development stages, and signs of developmental delays. http://www.webmd.com/parenting/baby/features/is-your-baby-on-track#1. Accessed on March 12, 2017.
ကလေးရဲ့ခေါင်းမှာ သန်းတွယ်နေရင် လုပ်ဆောင်ရမယ့် (၇) ချက်
ကလေးမှာ သေးခံလောင်တာ သက်သာစေမယ့် အချက်(၅)ချက်
အသားအရေထိန်းပစ္စည်းတွေကြောင့် ကလေးမှာဓါတ်မတည့်မှုဖြစ်လာရင် ဘယ်လိုကုသစောင့်ရှောက်ပေးမလဲ